Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukubambisa » IiViking Cruises: Yintoni entsha?
Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! • Ukubambisa • Ukukhutshwa kweendaba
IViking namhlanje ibhengeze eyona nqanawa intsha yolwandle, iViking Saturn®, eza kujoyina inkampani ephumelele amabhaso ekuqaleni kuka-2023.
IViking namhlanje ibhengeze inqanawa yayo entsha yolwandle, IViking Saturn®, Iza kujoyina inkampani ephumelele amabhaso kule nqanawa ekuqaleni konyaka wama-2023. Iinqanawa ezingama-930 zodade ziza kuchitha ixesha lazo lobuntombi zihamba ngeendlela ezintathu ezitsha kumazwe aseScandinavia naseNordic, kubandakanya uhambo lweentsuku ezili-15, i-Iconic Iceland, iGreenland neKhanada, kunye I-Iceland kunye ne-Arctic Explorer yaseNorway, kunye neentsuku ezingama-29 IGreenland, iIceland, iNorway kunye nangaphaya kwayo uhambo ngolwandle. Ukongeza kwiindlela ezintathu ezintsha, iViking ikwabhengeze namhlanje ukuba inkampani iyakubuyisa eyaziwayo yeentsuku ezisi-8 Ubuhle beNdalo baseIceland uhambo oluqala ngo-Agasti 2023.
“Amawakawaka eendwendwe athe ahamba ngomkhombe wethu Wamkelekile kwakhona uhambo oluya e-Iceland kweli hlobo liphelileyo belonwabele amava kangangokuba banike amanqanaba okurekhoda, utshilo uTorstein Hagen, uSihlalo weViking. “Olu hambo lutsha lulungele abahambi abanomdla kunye neendlela zabahloli bamandulo beViking ukuya eIceland nakwezinye iindawo ezikumNtla weAtlantic ezaziwa ngobuhle bendalo. Sijonge phambili ekwamkeleni IViking Saturn kwizithuthi zethu kunye nokubonelela iindwendwe ngeendlela ezingaphaya zokujonga le ndawo ikhethekileyo behlabathi bekhululekile. ”
Amanqaku amatsha kunye nokubuyela kuhambo lwamaNordic angama-2023:
Iconic i-Iceland, iGreenland kunye neCanada (ENTSHA) - Olu hambo lweentsuku ezili-15 lubandakanya i-Iceland, iGreenland kunye namaphondo aseCanada eNewfoundland naseNova Scotia. Ukuhamba ngesikhephe phakathi kweSixeko saseNew York kunye neReykjavik, iindwendwe ziya kuyithanda imo yentaba-mlilo kwiiWestman Islands, ziyonwabele indlela yokuphila e-Djúpivogur, kwaye zihamba-hambe kwizitalato zeedolophu ezintle njengeSeydisfjördur neAkureyri.
I-Iceland kunye ne-Arctic Explorer yaseNorway (ENTSHA) -Kolu hambo lweentsuku ezili-15, iindwendwe ziya kufumana ubomi kumantla akude ngexesha lohambo ngaphesheya kweArctic Circle nakunxweme olukude lwaseNorway naseIceland. Emva kokonwabela ukuhlala ubusuku bonke IViking SaturnIzibuko lasekhaya laseBergen, landela emanyathelweni eeVikings njengoko undwendwela iNorth Cape ekude eNtshona Koloni kwaye uphonononge iLongyearbyen, elilikhaya leebhere ezimhlophe ngakumbi kunabantu.
IGreenland, iIceland, iNorway kunye nangaphaya kwayo (ENTSHA) -Iindwendwe zinokukhetha ukudibanisa ezi zimbini zohambo lwe-epic-yeentsuku ezingama-29. Ukusuka kwisixeko sase-Bergen esasiyi-Hanseatic League, iindwendwe ziya kulanda indlela yeeViking kumazwe aseScandinavia eNorway, e-Iceland naseGreenland ngaphambi kokuya eCanada kunye nokugqiba eNew York.
Ubuhle beNdalo baseIceland- Ukubuya ngo-2023, olu hambo lweentsuku ezi-8 lujikelezayo lusuka eReykjavik luhlola amanxweme amakhulu e-Iceland. Ukuhamba ngomkhumbi IViking Star®, Iindwendwe ziya kudibana nobuhle bendalo obungenakuthelekiswa nanto, zingqina iingxangxasi ezibalekayo kunye neendawo ezintle zefjord. Landela ekhondweni lomhloli wamazwe onesibindi uLeif Eriksson, jonga izilwanyana zasendle zasekuhlaleni kwaye uzicwilise kwindalo.
Iinqanawa zolwandle iViking zineetoni ezingama-47,800, zinama-465 ama-staterooms anokubamba iindwendwe ezingama-930. Inqanawa yeViking yokuphumelela amabhaso elwandle kubandakanya IViking Star®, IViking Sea®,IViking Sky®,IViking Orion®, iViking Jupiter®kwaye IViking Venus®. IViking Mars®kwayeIViking Neptune®uya kujoyina izithuthi ngo-2022; IViking Saturn izakujoyina ekuqaleni kuka-2023. Ichazwe yi-Cruise Critic njenge "nqanawa ezincinci," iinqanawa zolwandle iViking zibonisa uyilo lwangoku lweScandinavia ngezinto ezintle, iindawo ezisondeleyo kunye nokuqwalaselwa kweenkcukacha. Amagqabantshintshi abandakanya:
Zonke iVeranda Staterooms: Iindwendwe zinokukhetha kwiindidi ezintlanu ze-stateroom, ukuqala kwi-270 sq. IiTV zeTV ezinemiboniso bhanyabhanya e-on-demand, i-Wi-Fi yasimahla kunye neendawo zokuhlambela eziwine amabhaso ngeeshawari ezinkulu, i-premium Freyja® iimveliso zebhafu kunye nemigangatho eshushu.
Indawo yokuKhangela: Iinqanawa zinee-14 ze-Explorer Suites, ezingamagumbi-amabini ane-suites ezisuka kwi-757 ukuya kwi-1,163 sq. iindwendwe.
Iindlela ezimbini zokukhetha echibini: Ukongeza kwiChibi eliPhambili elinophahla olunokurhoxiswa luvumela naliphi na ixesha lonyaka lokuqubha, iinqanawa zibonisa indawo yokuqala yeglasi exhaswe ngeglasi ye-Infinity Pool engafakwanga ngasemva, ivumela iindwendwe ukuba zidade zijikelezwe yindawo eziya kuyo.
I-LivNordic Spa: Ngokuhambelana nelifa lemveli laseViking i-Nordic, i-Spa ebhodini yenzelwe ifilosofi esempilweni yeScandinavia engqondweni-ukusuka kwisithethe se-sauna seenkulungwane ukuya kwi-Snow Grotto apho amakhekhe ekhephu ehla ngobunono eluphahleni ngomoya obandayo.
Indawo yokuhlala yabahambi kunye neMamsen: Yabelana ngecocktail nabahlobo. Hlala ngaphezulu kwesidlo sakusasa saseNorway kunye nencwadi yembali ye-nautical. Indawo yokuHlola i-Explorers kunye ne-Mamsen yindawo yokucinga ebekwe kwisaphetha senqanawa kwaye yenzelwe ukumela umoya waseScandinavia ukuze uphumle ngokupheleleyo kwaye umangaliswe kukujonga okuthe nkqo ngeefestile eziphakamileyo.
Indawo yaseWusikagarden: Iindwendwe ezifuna ukuzola ziya kuyifumana eWoldgarden. Kule ndawo intle phantsi kophahla lomthi waseScandinavia, iindwendwe zinokuzonwabisa ngenkonzo yeti yasemva kwemini.
Ukukhetha ukutya: Iinqanawa zikaViking zibonelela ngeendlela zokutyela ezisibhozo, zonke ngaphandle kwentlawulo eyongeziweyo okanye intlawulo — ukusuka kwindawo yokutyela entle kwindawo yokutyela, ebonelela izidlo ezithathu ezipheleleyo kunye neendlela ezahlukeneyo zokupheka, kunye neWorld Café, ebonisa ixabiso lokuhamba kunye namazwe aphesheya kubandakanya isushi kunye ibar yokutya kwaselwandle ebandayo -ukusondeza amanye amava okutya kwiTheyibhile yeChef, enikezela ngemenyu yokutya okungafaniyo neewayini, kunye neManfredi's, eneepasta ezisandul 'ukulungiswa kunye nezintandokazi zase-Italiya. I-Pool Grill igxile kwi-burour ye-gourmet, ngelixa iti yasemva kwemini kunye neescones ziyafumaneka eWoldgarden. UMamsen ukhonza isimbo saseNorway sokuhambisa, kunye nenkonzo yokuncoma yamahora angama-24 evumela zonke iindwendwe ukuba zizonwabele izitya ezininzi zokutyikitya kwintuthuzelo ye-stateroom yabo. Ngaphaya koko, kukhetho oluninzi lokuhlala ngaphandle ngexesha lokutya, iinqanawa zolwandle iViking zibonelela kakhulu fresco Ukutyela elwandle. Ukongeza, iTheyibhile yaseKhitshini igxile kwizitya zengingqi ukusuka kwintengiso ukuya kwitafile.
Inkcubeko yokuCetyiswa: Amava eViking ukusuka kwinqanawa ukuya elunxwemeni ayilelwe ukufikelela okungenakuthelekiswa nanto kunye nophuculo lwenkcubeko. Ababhali bembali beViking bahambisa kwinqanaba eliphezulu lembali kunye nemfundo yenkcubeko ethile kuhambo, inikezela ukuqonda okungathethekiyo kwimbali etyebileyo yendawo ekuyiwa kuyo. Abahlohli abaziindwendwe abaziingcali kumacandelo abo bakhanyisa ngobugcisa bendawo ekuyiwa kuyo, uyilo, umculo, geopolitics, umhlaba wendalo nokunye. Indawo ekuyiwa kuyo ibonisa ubugcisa bemidlalo yenkcubeko yommandla — nokuba yi-opera yase-Italiya okanye ifado yesiPhuthukezi. Abahlali beemvumi zeklasikhi — abadlala ipiyano, abadlala isiginkci, abaculi bevayolin kunye nabadlali beeflethi — benza iingoma zakudala kuzo zonke iinqanawa. Iiklasi zeCulinary kwiTheyibhile yasekhitshini, isikolo sokupheka eViking esikwi -board, sigxile kukutya kwendawo.
Ukuphefumlelwa kweNordic: Nokuba ezona nkcukacha zincinci zithatha ukuphefumlelwa kwabo kumoya wokuhlola weeViking zantlandlolo, ezibonakalisa izithethe zaseNordic. Ukukhanya kweenkozo zomthi, ukuchukumisa isileyiti kunye neteak, ilitye lekalika laseSweden kunye nomjunipha onuka kamnandi uvela kuzo zonke iindawo zoluntu kunye ne-Spa. Uyilo olwakhiwe yi-Clinker lweViking Bar lubonisa isitayile sokwakha iiViking Longship zangaphambili. IZiko leLifa leMveli leViking libonelela ngembali kunye nomxholo ukusuka kwiViking Age. Kwaye abalinganiswa abavela kwiNtsomi yeNorse bafakelwe ngobuqhetseba kuyilo, ukubonelela ngeendwendwe ezinomdla ngenkuthazo yokuqhubela phambili ukuphonononga iViking yelifa leMveli laseNordic.